Websaydhka Naqshadeynta Bellevue Washington
Sidee isenselogic.com u dhistaa shabakadahaaga
Dhisida degel ganacsigaaga ah wuxuu u baahan yahay inuu ka bilowdo aasaaska ereyada muhiimka ah ee dadku adeegsanayaan si ay u helaan adeegyadaada. Haddii websaydhkaaga aan loo habeynin mashiinnada raadinta macaamiil cusub ayaa aadaya kuwa kula tartamaya.
Tallaabada 1: Falanqaynta Ganacsiga Suuqa Discovery
Falanqee website. Waxaan eegeynaa meta meta / keywords, qoraalka muuqda iyo koodhka si aan u aragno sida ugu wanaagsan ee boggaagu u taagan yahay matoorada waaweyn ee raadinta. Tusaale ahaan, intee in le’eg ayey ka kooban tahay waxyaabahaagu mawduucyada muhiimka ah ee macaamiishu raadinayaan?
Falanqee kuwa kula tartamaya. Waxaan baareynaa boggaga internetka ee tartamayaashaada kuwaas oo kujira liistada 5-ta sare si loo go'aamiyo istiraatiijiyadda ugu fiican ee wax ku oolka ah meeleynta mashiinka raadinta.
Bartilmaameedka ereyada ugu waxtarka badan. Waxaan soo saareynaa liisaska mudnaanta leh ee keywords keywords bartilmaameedka ku saleysan waxa macaamiisha ay raadinayaan. Maxaad ku qori lahayd mashiinka raadinta si aad u hesho meheraddaada ama boggaaga? Waxaan markaa qaadaneynaa eraygaas muhiimka ah iyadoo la adeegsanayo qorsheeyaha keyword-ka ee Google waan heli karnaa keywords keyword laga yaabaa inaadan ka fikirin. Waxaan sidoo kale adeegsanaa qorsheeyaha muhiimka ah si aan u ogaano tirada saxda ah ee macaamiisha baaraya keywords gaar ah oo aan bartilmaameedsaneyno kuwa kordhinaya dakhliga ganacsiga.
Tallaabada 2: Horumarinta erayga iyo Cilmi-baarista
Falanqaynta ereyga: Laga soo bilaabo liistadayada ereyada muhiimka ah, waxaan ku aqoonsannaa liiska bartilmaameedka ereyada muhiimka ah iyo weedhaha. Dib u eegista ereyada warshadaha kale iyo ilaha kale. Adeegso liiska ugu horreeya ee ereyada muhiimka ah oo go'aamiso tirada weydiimaha mashiinka raadinta. Waxaan markaa beegsaneynaa ereyada muhiimka ah tiro, kelinno iyo weedho.
Ujeeddooyinka iyo Himilooyinka. Waxaan si cad u qeexeynaa ujeedooyinkaaga ka hor si aan u cabbiri karno soo noqoshadaada maalgashiga barnaamij kasta oo xayeysiis ah oo aad bilowdo. Tusaale ahaan, yoolkaagu wuxuu noqon karaa inaad boqolkiiba 30 kordhiso taraafikada ganacsiga. Ama waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad hagaajiso heerkaaga beddelka ee hadda ah 2 boqolkiiba illaa 6 boqolkiiba.
TALLAABADA 3: KOOBAN KA-QAYB-GELINTA IYO KHILAAFKA
Abuur cinwaannada bogga. Cinwaannada ku saleysan ereyga muhiimka ah waxay gacan ka geystaan ​​sameynta mawduuca boggaaga iyo qulqulka ereyadaada muhiimka ah. Abuur tags. Sharaxaadda sumadda 'Meta' iyo caawinta saamaynta gujinta laakiin si toos ah looma isticmaalo qiimeynta. Ku dheji wejiyada istiraatiijiyadeed raadinta bogagga. Ku dhex dar ereyada muhiimka ah ee la soo xulay koodhka ilahaaga websaydhka iyo waxyaabaha ka jira bogagga loogu talagalay. Waxaan hubineynaa inaan ku dabaqno tilmaamaha la soo jeediyey ee hal ilaa seddex eray oo muhiim ah bog kasta oo ku jira oo aan ku darno bogag badan si aan u dhameystirno liiska. Waxaan hubineynaa in ereyada muhiimka ah ee laxiriira loo adeegsado ka mid noqoshada dabiiciga ah ee ereyada muhiimka ah. Waxay ka caawineysaa makiinadaha raadinta inay si dhakhso leh u go'aamiyaan waxa bogga ku saabsan yahay. Habka dabiiciga ah ayaa sida ugu fiican u shaqeeya. Tijaabooyin badan ayaa muujinaya in bogagga leh ereyada 800 illaa 2000 ay ka fiicnaan karaan kuwa gaagaaban. Dhamaadka, adeegsadayaasha, suuqa, iskuxirayaasha mawduucyada ayaa go'aamin doona caannimada iyo tirooyinka darajooyinka.
Tallaabada 4: Hubso in websaydhkaagu uu yahay mid saaxiibtinimo leh
Marka loo eego Google baaritaano badan ayaa lagu sameeyaa aaladaha mobilada marka loo eego qalabka desktop-ka. Jawaab ahaan Google waxay u beddeshay algorithms-keeda raadinta inay u roonto bogagga moobiilku saaxiibtinnimo yahay. Haddii websaydhkaagu hadda uusan ahayn mid saaxiibtinimo mooyee waxaad luminaysaa macaamiisha.
Tilaabada 5aad: Tijaabinta iyo Cabirka joogtada ah
Tijaabi oo cabir: Falanqee qiimeynta mashiinka raadinta iyo taraafikada webka si loo go'aamiyo waxtarka barnaamijyada aad hirgelisay, oo ay ku jiraan qiimeynta waxqabadka ereyga shaqsiyeed. Tijaabi natiijooyinka isbeddelada, oo ku hay isbeddelada in lagu dabagalo xaashiyaha 'Excel', ama wax kastoo aad ku qanacsan tahay.
Dayactirka Isku-darka socda iyo wax ka beddelka ereyada muhiimka ah iyo waxyaabaha ku jira websaydhka ayaa lagama maarmaan u ah in si joogto ah loo hagaajiyo qiimeynta mashiinka raadinta si koritaanku uusan u istaagin ama uusan u diidin dayacaadda Waxaad sidoo kale dooneysaa inaad dib u eegis ku sameyso istiraatiijiyadda isku xirkaaga oo aad hubiso in iskuxirkaaga iyo kabixidaada ay la xiriiraan ganacsigaaga Blog ayaa ku siin kara qaabdhismeedka lagama maarmaanka ah iyo sahlanaanta ku darista waxyaabaha aad u baahan tahay. Kaaga shirkada martigelinta waxay sida caadiga ah kaa caawin kartaa dejinta / rakibidda barta.